Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd. kuyinto nomkhiqizi professional kanye isithekelisi okuyinto kwakuphathelene design, ukuthuthukiswa kanye ukukhiqizwa Auto Air Conditioning samandla, kanti ezinye ahlobene Auto A / C Izingxenye. Zonke imikhiqizo yethu ukuhambisana namazinga izinga international futhi baziswa kakhulu kunoma ezihlukahlukene izimakethe emhlabeni wonke.
Igatsha lethu kahle futhi omuhle kakhulu ukulawula izinga kulo zonke izigaba ukukhiqizwa kusenza sikwazi ukusukumela phezulu isiqinisekiso Imininingwane ukwaneliseka amakhasimende. Sisabalalisa ozinzile futhi ezihlukahlukene Auto A / C samandla futhi Auto A / C izingxenye ngayo yonke inhliziyo yethu. Ngenxa yalokho imikhiqizo high oluvelele kwamakhasimende, umkhiqizo wethu kakade ukuthekelisa eNyakatho Melika, i-Ningizimu Melika, South-East Asia, yaseMpumalanga Ephakathi nakwamanye amazwe ahlobene.
Thina ingabe ufuna izinto zenziwe "Quality Excellent, aqotho Trust, Nenkonzo Uphelele". Ningakhathazeki wekhasimende abakhathazekile, wacabanga umcabango yekhasimende, ukusiza isidingo yekhasimende. Sikulethela emhlabeni kwezomnotho kubathengi. Abazithobayo ngabomvu abe nokubambisana eside nokuthuthukiswa amakhasimende. Siyakwamukela abangani ukuxhumana nathi!